Selokhu ezikhathini zasendulo umuntu ezama lula umsebenzi wakhe. Ukuze wenze lokhu, usebenzisa ezihlukahlukene amadivaysi. Yiziphi indlela elula? Yiziphi izinhlobo ezahlukene lezi amadivayisi? Uyini elula umehluko futhi izakhi eziyinkimbinkimbi? Ngalolu futhi eziningi nezinye izinto - kamuva esihlokweni.
izindlela Simple (kusuka esiGrekini "machine gun".) - amadivayisi ukunikeza inzuzo lokukhanda. Ezinye zalezi amadivaysi avele ezikhathini zasendulo. izindlela Simple kungenzeka kumadivayisi ahlukene noma izakhi ukuba lokubolekwa eziyinkimbinkimbi. Kuye ohlotsheni isakhiwo kunqunywa nobubanzi umshini othile. Ukusetshenziswa izindlela ezilula kusiza kakhulu umsebenzi womuntu. Amadivayisi anjalo ukunikeza inzuzo lokukhanda. Ngokwesibonelo, nesigaxa esibethelwe phakathi billet, kunamandla ngaphezu kwamaminithi igalelo kudivayisi. Ngakho-ke, isihlahla ngokushesha okuncane ngaphandle. Nalokhu, nomthelela nesigaxa uwela phansi, futhi izingxenye sishukumiseleka wagudluka nabo ecaleni log. Lokho, kulesi simo kukhona uguquko yekuhambisa sandla.
izindlela Simple. izibonelo
Kunezinhlobo eziningana amadivayisi:
indiza enalokho kuthambekela
a) izipikili ngezikulufo njengendlela umgxala jackhammer, sokuzivivinya; futhi zingaba indlela wokuphakamisa (Archimedes isikulufa) ;
b) nesigaxa kwandisa ingcindezi ngenxa emakamu mass endaweni encane. Isetshenziselwa echibini, ifosholo, umkhonto.
Isigwedlo - idivayisi esachazwa Archimedes. Ingaba njengesihluthulelo inkinobho inhlamvu.
a) esangweni isetshenziselwa drive ibhande futhi Ukukhuphula amanzi emthonjeni.
Leli sondo (3 yasungulwa ayizinkulungwane. BC. E. Sumerians) kuyingxenye uhlelo igiya asetshenziswe ezokuthutha.
I piston kunomthelela ukusetshenziswa lukagesi evuthayo amagesi akhula njalo noma umusi. Le divayisi isetshenziswa umusi izinjini kanye nezibhamu.
Le divayisi isigubhu (isilinda), lapho isibambo unamathele. Njengomthetho, lalisetshenziswa njengento esetshenziswayo ephakamisa lokukhulisa amanzi emthonjeni. Inzuzo ngamandla, okuyinto atholakala ngokusebenzisa esangweni kunqunywa ratio engaba mbuthano, okuthi ukunyakaza isibambo engaba isilinda (isigubhu) ku okuyinto silimaza intambo. Ukuze uhlobo yesimanje wesango libhekisela indophi. Le divayisi uhlelo ehlanganisa a uMbhalo bese ezimbili amasondo toothed ka radii ezahlukene. Inzuzo ngamandla, okuyinto ngokuvamile linikeza indophi ukunquma umphumela elihlangene leli bhande ezimbili. amadivaysi Modern unikeze inzuzo ezikhathini amane nanye, anamakhulu mane.
Le ndlela yokwenza elula futhi ivame ukusetshenziswa lapho ephakamisa emizimbeni esindayo. Inzuzo ngezikhwepha kunqunywa ratio ubude idivaysi ukuphakama kwalo enikeziwe ngomshikisho encane. Ngokuvamile, ukukhiqiza butho elikhulu (isib i ophihliza iqhwa noma wokuqhekeka zokubasa) isetshenziswa i enalokho kuthambekela indiza umbono - Wedge. isenzo sayo sisekelwe yokuthi uma butho elikhulu e ngesidunu ukwakha samabutho amakhulu perpendicular ohlangothini evele zedivayisi. Olunye uhlobo isikulufa kuyinto indiza ezintweni ezingafanele. Kanye nesigaxa, kule divayisi uyakwazi ukushintsha isiqondiso noma inani lenombolo isicelo amandla.
izindlela Simple. isigwedlo
Lena uyakwazi okuqinile, ka uzungeza ukwesekwa (fixed). Ibanga emfushane ohlukanisa Fulcrum kanye umugqa oqondile kanye okwakukhona kuzo amandla enza isigwedlo, ngokuthi amandla ehlombe. Ukuze ukuthole, kufanele ukulahla perpendicular kusukela Fulcrum emgqeni amandla. Ubude perpendiculars kuyoba ihlombe. F1 futhi F2 - amabutho ayisukumele isigwedlo. Emahlombe, esebenza kudivayisi - L1 futhi L2. Isigwedlo ke kuyinto zilingana lapho ibutho siphile ngokuvumelana nalo kukhona inhlukanozigaba kuya emahlombe. Lo mthetho ungaboniswa njengoba ifomula: F1 / F2 = L1 / L2. Lomgomo esasungulwa Archimedes. Lo mthetho ibonisa ukuthi butho elikhulu esebenzisa ukulinganisela isigwedlo kungaba ezincane. Amandla isetshenziswa ihlombe elilodwa, kaningi obukhulu kunobukaJohane isetshenziswa omunye, kangakanani ihlombe elilodwa ephakeme kweyesibili.
Indlela ukusebenzisa amathuluzi abantu namuhla?
imishini Abaningana impela ezivamile ezilula ekuphileni kwansuku zonke. Ngakho, kungaba nzima ngempela ukuvula empompini, uma akazange abe isibambo ezincane, okuyinto isigwedlo ngokwanele ngempumelelo. I Kungashiwo okufanayo we ukusonta esebenzisa lapho ziba ngcono noma kokuqina ngezikulufo noma imishudo. The eside isigwedlo, kubalula kuyoba isinyathelo. Ngakho, lapho esebenzelana nesizwe nuts ezinkulu noma ezisindayo nemishudo ukuze ukulungisa imishini eyinkimbinkimbi, umshini amathuluzi, izimoto, okhiye ukusetshenziswa ne izibambo imitha elilodwa ubude. Umnyango ezivamile futhi omunye izinhlobo amadivaysi enixoxa ngalo. Uma uzama ukuvula umnyango eduze okunamathiselwe yayo, kuyoba nzima kakhulu. Nokho, okuthuthukile isibambo iluphu okungukuthi, kuba lula ukuvula umnyango. Ngokwanele isibonelo ecacile egumbini isigxobo. Ubude bayo ezinhlanu amamitha. Nale isigwedlo futhi ngendlela efanele isicelo amandla nomsubathi uphatha lalanda kumuntu ukuphakama ngamamitha ayisithupha. Ingalo eside kuleli cala cishe ezintathu amamitha. Iziyisikhombisa atholakala ezingxenyeni ezahlukene umzimba womuntu nomzimba isilwane. Lokhu, ikakhulukazi, imihlathi, nemilenze. Izibonelo yasendlini isigwedlo impintshisi ukusika iphepha noma insimbi sikelo. Machines ezinhlobo ezehlukene kukhona kuhleliswa kanye namadivayisi evumela inzuzo amandla. Ngokwesibonelo, isinyathelo noma isandla ukubopha ngebhayisekili, umshini wokuthunga izibambo, upiyano okhiye.
amadivaysi isicelo Complex
izindlela Simple atholakala ezihlukahlukene inhlanganisela. amadivaysi Kuhlanganiswe zihlanganisa izingxenye ezimbili noma ngaphezulu. Akunjalo ngempela-ke kuyoba indlela eziyinkimbinkimbi - kumadivayisi amaningi elula ingaxaka. Ngakho, okwamanje grinder isibambo (isango) isikulufa propulsive inyama nommese umsiki (nhlonhlo). Imicibisholo Iwashi kuthiwa ijikelezwe esebenzisa isimiso amagiya kokuba ububanzi ezahlukene futhi nomunye ukuzibandakanya. Omunye indlela eyaziwayo ayinzima Jack elihlangene. Kwakuvamise inhlanganisela esangweni futhi Rotor.
Njengoba kwaba sobala, izindlela ezilula kakhulu lula bokusebenza komuntu. Zingase libe izingxenye eyodwa noma ngaphezulu. Ngakho ngisho nalapho izakhi ezimbili noma ngaphezulu angagcinwa elula, kodwa zingaba nkulu ngempela eziyinkimbinkimbi. lokubolekwa abahlukahlukene, imishini yokunyathelisa, izinjini zihlanganisa izingxenye eziningana. Phakathi kwezakhi, kukhona iziyisikhombisa, amabhlogo, ngezikulufo, isondo ku-eksisi etshekile indiza nhlonhlo. Konke lokhu amadivayisi ukusebenza eyinkimbinkimbi. Siyabonga kubo, indoda kusiza kakhulu umsebenzi. Ukudluliswa amandla mechanical kusuka libe linye kwenye idivayisi kungase kwenziwe ngezindlela ezahlukene. Emaketangeni, amabhande, amagiya, noma amagiya ezibhekwa amadivaysi ezivamile ukudluliselwa umzamo futhi kwenza izingxenye ngabanye ukuhambisa kancane noma ngokushesha kwelinye direction noma kwenye. amadivaysi eziyinkimbinkimbi nokulawula ngesivinini esikhulu, amadivaysi ngokuvamile electronic. Izinzwa kagesi ngenxa ekhethekile kulungiselelwa show uma kudingeka ukufaka omunye noma enye indlela nalo ziqashwe operation lesifanele oqine kohlelo. Amadivayisi amaningi ukuza empilweni indoda yesimanje sika kusukela ezikhathini zasendulo kakhulu. Abantu njalo ekuthuthukiseni izindlela eziyinkimbinkimbi, ngaleyo ndlela ukunabisa kwenkululeko isicelo sabo. Ngokungangabazeki, imishini ehlukahlukene luthathe indawo ebaluleke kakhulu ekuphileni kwansuku zonke. Okuningi ayikwazi wacabanga ngaphandle ukusetshenziswa izindlela ezilula futhi eziyinkimbinkimbi. Amadivayisi kabanzi ukwakhiwa, ezolimo, ezimayini kanye nakwezinye izici umsebenzi womuntu.
Kuyini inhlamba? inkinga inhlamba
Kunama ngomkhumbi kanye namathafa zemvelo
Equatorial ibhande: indawo. Equatorial ibhande: izici
Bastard - uphawu Ephakathi noma lisebenza kwezomthetho?
Isiqondiso amakhono - ke ... yokuhlola umsebenzi isiqondiso abafundi. isiqondiso Homeroom umsebenzi
Edge Yehlathi - kuyini?
Smoothies Green zihlukile. Ngezinye izikhathi kakhulu ...
Yini imibhalo kudingeka ku isithuthuthu?
Zabesilisa Jacket Park - isihloko esiyisibopho izingubo!
Ukubhula yisifiso Svyatka. Christmastide inhlanhla: izindlela nezinhlobo
Zenhliziyo - wenhliziyo bodumo ...
"Drotaverinum" kulokho? "Drotaverinum" - a "Cha-spa"?
Dream Ukuhunyushwa: yini uyaphupha Shit
Ikhekhe Almond: izindlela eziningana
Haircut for ezisontekile
Izakhiwo ezisebenzisekayo caloric pepper amnandi
Abathandi cat. Indlela ukunciphisa izimpiko ikati sika